Corgi Husky Mix: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara - Reeddịrị
Ngwakọta Corgi Siberian Husky bụ nkịta ngwakọ nke e buru ụzọ n'oge 1990s.
Ngwakọta Corgi a na-ejikọta ọgụgụ isi na ụdị ọrụ nke Corgis na nnwere onwe na ume nke Huskies. Ha dị nnọọ nkọ ma -eme ka oké enyi maka a ụtụtụ ọsọ!
A maara ha nke ọma dị ka Corgski mana mgbe ụfọdụ a na-akpọ ha Horgi.
Ngwakọta n'etiti Siberia husky na Pembroke Welsh Corgi bụ ezigbo anụ ụlọ maka onye ọ bụla nwere ụdị ndụ na ịhụnanya nke ọzụzụ.
Ọ nwere ike ịbụ nkịta zuru oke maka gị? Gụọ na ịchọta ihe ndị ọzọ ...
Kedu ihe bụ Corgi Husky Mix?
Ihe Mere Anyị Ji Hụ Corgi Husky n'Anya
Corgi Husky Mix Nwa nkita
Ego Ole Ka Horgi Dị?
Kedu ihe ngwakọta Siberia Husky Corgi dị?
Olee Nnukwu Otu A Corgi Husky Mix Nweta?
Uwe na Agba
Corgi Husky Mix Ọnọdụ
Ha Bụ Ezigbo Nkịta Ezinụlọ?
The Horgi bụ obe n'etiti nwanyị Siberia Husky na nwoke Corgi.
Enwere abụọ ụdị Corgis ya mere enwere ike iji Cardigan ma obu Pembroke Welsh mee ihe maka ngwakọta a Husky. Pembroke Welsh Corgi bụ nhọrọ kachasị ewu ewu.
A hụrụ nkịta a na America n'oge mbụ na 1990s mana ndị otu na-eto eto ma ọ bụ ụlọ ọgbakọ ụlọ amatabeghị ya.
Ngwakọta Corgi Husky na-arụ ọrụ nke ọma mana ọ bụ kọmpat amaara nke inwe ume na iguzosi ike .
Ngwakọ ngwongwo zuru oke maka onye na-enweghị ohere maka ụdị buru ibu ma na-achọ ike na ọkwa ọrụ nke nnukwu ụdị.
Dika okwesiri ka enwere ihe omuma di nkpa banyere otua esi ewu ewu ma oburu na eji ya tunyere ndi nne na nna ya. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na 2008 ha ewu ewu nwere mụbara 10-okpukpu . Ngwakọta a bụ ihe ewu ewu na ndị hụrụ nkịta mana ọhaneze anaghị anụtụ ya.
E debara akụkọ banyere Pembroke Welsh Corgi na Siberia Husky nke ọma ma nwee ike nyere anyị aka ịmatakwu ụdị ngwakọ a.
Pembroke Welsh Corgis sitere na Pembrokeshire na South Wales (United Kingdom). Ha na eji aturu igwe aturu ma chebe ha pụọ ​​n'aka ndị na-eri anụ ma ọ bụ ndị na-eri anụ. Ya mere, ha abụọ onye na-elekọta anụ ụlọ na ìgwè ozuzu.
Nkịta ndị a nwere ike pere mpe mana ha dị ike!
A na-ahọrọ obere obere ha ka ha chebe ha site n'ịhụ na ha dị n'okpuru ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-agbaji!
Ebuba Corgis na United States na 1930s wee bụrụ onye a ma ama kemgbe.
Siberia Huskies bu ụzọ zụọ ihe karịrị afọ 12,000 gara aga site n'aka ndị Chukchi . N'adịghị ka Corgi, ejiri ha dị ka nkịta na-ebufe ebuga ngwa ahịa na nri.
Ndị Huskies ghọrọ ndị a ma ama na mmalite narị afọ nke 20 mgbe ịgba ịnyịnya ibu ghọrọ egwuregwu a ma ama na Canada na Alaska.
N'ihi mmụba ha na-ewu ewu site n'ịgba ọsọ sled, ha ghọrọ ìgwè na-ewu ewu maka ezinụlọ.
Ha bụ 15 nke ụdị nkịta kachasị ewu ewu na United States na na-ebi ndụ obi ụtọ n'akụkụ ezinụlọ ndị nọ n'ọrụ .
Enddị ume ọkụ ha na-adịghị agwụ agwụ!
Dogsmụ nkịta a na-aga n’ihu.
Ha hụrụ ndị nwe ha n'anya ma mara ha dị ka nkịta nwere omume enyi.
Bredị a hụrụ n'anya ịnọnyere ezinụlọ ha.
Ihe omuma ha bu na ha di ngwa ngwa.
Friendlydị omume enyi nke Horgi na-agbatị ndị nwe ha n'oge gara aga nye mmadụ niile. Pumụ nkịta a na-ahụ n'anya nabatara ihu ọhụụ ọ bụla na ndụ ha.
Ike ha na-adịgide adịgide pụtara na ha na-egwuri egwu mgbe niile. Ha hụrụ egwuregwu ịchụ nta na ihe ọ bụla metụtara bọọlụ n'anya!
20 ruo 50 pound
12 - 15 sentimita asatọ
Nwa nkita a adighi otutu, ya mere ịchọta ezigbo onye ọrụ Horgi nwere ike isi ike . Ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na onye ị na-azụ ihe ị na-achọ nwere ndepụta ichere ogologo. Nke ahụ bụ ihe a na-ahụkarị maka ngwakọ a.
N'ihi ọdịiche dị nha dị n'etiti ụdị nne na nna otu onye na-azụlite aha ya ga-eji Husky nwanyị na Corgi nwoke eme ihe.
Mgbe ịzụrụ Corgi Husky Mix ị ga-eme otutu nnyocha :
Gbalia juo ajuju niile i nwere banyere nwa nkita.
Lelee ndị na-azụ akwụkwọ ikikere.
Should kwesịrị inwe ike izute nne ụmụ nkịta ma nweta ozi gbasara nna ya ma ọ bụrụ na ọ bụ nkịta ọkpọ.
Ikwesiri ileta ụmụ nkịta ọtụtụ oge tupu ị kpọta otu ụlọ.
Otu Siberia Husky Corgi Mix nwere ike ịdị n'etiti $ 300 na $ 1,000 dabere na mpaghara mba ị na-azụ ha n'aka, nke ndị na-azụ ihe ị na-eji, usoro ọmụmụ nke ndị nne na nna na ọgbọ ụmụ nkịta.
Nwa nkịta nke abụọ ma ọ bụ nke atọ ( ntụgharị F2 na F3 ) na-adịkarị ọnụ karịa ọgbọ mbụ.
Hụ Isiokwu Ndị Ọzọ Yiri: Ndi Corgis wụsịrị? Eziokwu Ndabere I Kwesịrị Knowmara
O di nwute, ngwakọta Corgi a enweghi oru nnaputa. Nke a bụ obere n'ihi na anaghị amata ha dị ka nkịta dị ọcha, na enweghị otu ìgwè ma ọ bụ ọkọlọtọ.
Ha dịkwa oke ụkọ. O yikarịrị ka ị gaghị achọta otu na ndo.
Y’oburu n’uche obi gi na i naputa udiri ngwuru a, i gha anwa iche ulo ma obu Husky ma obu Corgi. Ọ bụ ezie na ha abụghị ihe ọhụrụ ọ bụghị anụbeghị ịchọta nnapụta.
Redkọ ọdịdị nke Corgi Husky nwere ike ịbụ ihe mgba! Nke a bụ eziokwu maka ọtụtụ Corgi mix ụdị anụmanụ .
Mma nke nkịta ngwakọ bụ ọdịdị ha pụrụ iche.
Nọmalị ha nwere aru nke Corgi na njirimara anụ ahụ nke Husky ( dika ọdụ ọdụ, ogologo imi na anya na-acha anụnụ anụnụ ).
Nke a pụtara na ha ga-enwe ụkwụ Corgi dị mkpụmkpụ na ahụ ogologo na ihu Husky, uwe na ọdụ.
Ihe ozo di iche puru ibu eziokwu. Fọdụ nwere ike ịdị ka nke husky mgbe ahụ corgi.
N'ihi nnukwu ọdịiche dị n'etiti nkịta nne na nna abụọ ọ siri ike ịkọ ịdị elu na ịdị arọ nke ngwakọta a.
Simplezọ dị mfe bụ iwere ma nne na nna nha na ogo ya na gbakọọ nkezi .
Nke a ga - emepụta elu 12 na 15 sentimita. Agbanyeghị, ha nwere ike ịdị mkpụmkpụ dịka Corgi ma ọ bụ to ogologo karịa nne na nna ha Siberia Husky.
Otu ihe a metụtara ịdị arọ ha. Ná nkezi, Corgi Husky Mix ga-adị n'etiti 20 na 50 pound.
Horgi ketara nne na nna ha Husky, akwa, ogologo, uwe abụọ. Uwe a nyere aka mee ka oyi na-atụ n'oge oyi n'oge oyi.
O di nwute na uwe ha bu ihe ojoo na ihe si na ya puta abụghị hypoallergenic . N'ihi ya, ngwakọ a adịghị adabara ndị na-arịa ọrịa nfụkasị ahụ.
Ha kachasị agba dị iche iche:
Dị ka nne na nna ha abụọ, ha ga-abụkarị nchikota nke agba abụọ ma ọ bụ karịa (ma ọ bụghị otu agba agba).
Ntuziaka na ịzụ anụ
N'agbanyeghị oke nke a lapdog ahụkarị, o yikarịrị ka ị gaghị ahụ ngwakọta a agbatị n'apata gị. Ha dị oke ike ma na-ahọrọ iji oge ha na-achụ squirrels, na-egwu egwu ma ọ bụ ọzụzụ aghụghọ!
Nkịta ndị a nwere omume enyi, ịhụnanya, dị nwayọ ma na-egwuri egwu.
O siri ike na ha na-agbasi ike ma ọ bụ na-asọ oyi n’ebe ndị bịara abịa nọ.
Ngwakọta Corgi Husky hụrụ ndị nwe ha n’anya nke ukwuu ma nwee ọ spendingụ iso ha nọrọ.
O di nwute na iguzosi ike n'ihe ha nwere ike iduga na nsogbu nkewa ma oburu na ha adighi ele ha anya ka ndi nwe ha laa. Site na ubochi iwetara nwa nkita gi ulo na-akwadebe ha inwere onwe ha .
Ha na-enwekwa obi uto nke nwere ike ime ka ekele ha nwee obi uto.
Ọ bụrụ na ọ gwụ ha ma ọ bụ chọọ anya nkịta a, obere nkịta a ga-adọgbu onwe ya n'ọrụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị nwere ndị agbata obi na nso nso - ọgbaghara nsogbu na-adịkarị na Huskies.
N'ikpeazụ, n'agbanyeghị ma nne na nna nkịta na-arụ ọrụ akụkọ ihe mere eme na mix a abụghị ezigbo nkịta na-eche nche. Ngwakọta husky corgi bụ omume enyi ma nwee ike ịnabata ndị bịara abịa karịa ịchụpụ ha.
Ee ngwakọta corgi a bụ nkịta na-egwu egwu ma na-ahụ n'anya nke ga-eji obi ụtọ tinye aka na egwuregwu dị ka tug ma ọ bụ kpọta ruo ọtụtụ awa! Ha na-eme ezigbo ulo maka ezinulo di ike nwere umuaka meworo okenye.
Ngwakọta a bụ nkịta na-eme mkpọtụ na-atọ ụtọ nke siri ezigbo ike. Ha nwere ike ichefu ike nke aka ha ma n'ihi ya adabaghị nke ọma n'ụlọ nwere obere ụmụaka.
A zụrụ nne na nna ha Corgi ka ọ na-azụ atụrụ.
Nke a pụtara na ọ na-atọ ha ụtọ ịchụ egwuregwu, ha ga-enwekwa ike ịchụ obere furies n'ime ụlọ! Àgwà a nwere ike gafere a Corgi mix ya mere ha bụ akwadoro maka ụlọ na anụ ụlọ ndị ọzọ .
Ọbụna Horgi kachasị mma ga-agbanye ụkwụ nkwonkwo ụkwụ nke nwatakịrị mgbe ọ na-emebiga ihe ókè na mgbalị iji zụọ ha.
Ngwakọta Corgi Husky dị ezigbo mma ma nwee obi ụtọ na nkịta nwere nkezi ndụ maka afọ 12 na 15 .
Dika uzo di iche-iche, ha na-achota ikike di nma karie ndi nne na nna ha ma nwee ike iria oria di ole na ole.
Agbanyeghị, enwere ahụike abụọ ị kwesịrị ịmara.
Ha nwere ike ịta ahụhụ site n'ụdị dwarfism amara dị ka achondroplasia nke Corgis na-ata ahụhụ. Nke a bụ ihe na-eme ka ụkwụ ha dị mkpụmkpụ ma ogologo ahụ! Nke a na-eme ka ha maa mma ma na-emekwa ka okwu azụ.
Enweghị ọgwụgwọ maka achondroplasia. O siri ike ma dị ize ndụ ịnwa imezi ịwa ahụ. N'ihi ya, ọtụtụ ụmụ anụmanụ ga-ahọrọ iji ọgwụ mgbu na ọgwụ mgbochi mkpesa na-agwọ ọgwụ.
A makwaara Corgi Husky Mix na-arịa ọrịa Uveodermatologic. Nkịta ndị na-arịa ọrịa a ga-ekpu ìsì mgbe ụfọdụ.
Ọgwụgwọ ọnọdụ a na-agụnyekarị corticosteroids kpụ ọkụ n'ọnụ. Agbanyeghị ọ na - eme ihe ike ma na - aga n'ihu na ikpu ìsì n'ime ọnwa atọ.
Ngwakọta a nwere ike ịme ihe ndị magburu onwe ulo nkịta n'ihi ntakịrị ha.
Ha na-enwekwa obi uto dika ha bi n’ime obodo n’ime ezinulo n’ezinaulo nwere umu ka okenye!
Siberia Husky Corgi Mix bụ akwadoro maka ndị nwe oge mbụ dị ka a maara ha dị iche n'echiche onwe ha. Corgis na Huskies abụọ nwere ọgụgụ isi ma sie ike bụ ndị ga-enye ndị nwe ha ọsọ ma ọ bụrụ na enyere ha ohere.
Agbanyeghị na adabaghị maka ndị nwe nke oge mbụ, ha bụ ezigbo anụ ụlọ maka ndị nwe nkịta nwere ahụmahụ.
Nduzi ~ Calorie 500
Ma Husky na Corgi bụ nkịta na-arụ ọrụ na-achọ ọtụtụ nri dị elu. Ngwakọta ngwongwo a nke muscular na-arụ ọrụ adịghị iche.
Nkịta ndị a na-eme nke ọma na kibble dị elu.
Ọ bụrụ na nkịta gị na-arụsi ọrụ ike, ị nwere ike ịchọrọ nri nri protein dị elu nke akọwapụtara maka ụdị ọrụ na-arụ ọrụ iji nyere ha aka ịkwado akwara ha.
Ndi nwe ha kwesiri itinye otu iko kibble nri.
Ngwakọta a nwere afo siri ike ka ha wee rie akọrọ, nri ndu ma obu mmiri .
Kpachara anya ka ị ghara ịna-erife nwa nkịta gị. Feedingnafere oke ga-etinye nsogbu na-enweghị isi na azụ na hips.
Mmega Ahụkarị Ozi kpọtara
A kọwara ụdị a dị ka mgbe niile na-aga. Ọ kachasị mma maka ụlọ ndị na-arụsi ọrụ ike bụ ndị na-enwe obi ụtọ ịnọ n'èzí ma na-arụsi ọrụ ike!
Ha na-arụsi ọrụ ike ma chọọ ma ọ dịkarịa ala otu awa na-emega ahụ kwa ụbọchị . Ihe ọ bụla na-erughị nke a ga-ebute nkịta na-ebibi ihe nke na-enwe mmụba nsogbu.
Corgi Husky Mix hụrụ egwuregwu egwuregwu n'ihi na ha bụ ndị na-azụ anụ. Ha nwere mmasị ịchụso ma jiri obi ụtọ jiri ọtụtụ awa na-egwu bọl!
Ha nwere ike ncheta magburu onwe ya mgbe a zụrụ ya . Ọ ga-abụ ihe amamihe na-adịghị na ya ikwe ka nkịta a na-azụghị ọzụzụ pụọ na ndu n'ime oghere - ọkachasị nke nwere nnukwu anụ oriri. Site na anụ oriri nke Corgi na ume nke Husky o yighị ka ha ga-akwụsị ịchụ anụmanụ.
Ngwakọta Corgi a ọ bụghị naanị na ọ chọrọ mmetụ anụ ahụ, kama ọ na-akpali akpali ọgụgụ isi.
Ha bụ nkịta nwere ọgụgụ isi, ike ga-agwụ ha ma ọ bụrụ na a hapụ ha n'echiche nke aka ha. Inggba egwuregwu na-esi isi n’ogige gị na-arụ ọrụ nke ọma. I nwekwara ike iji nri na ihe egwuregwu.
Ngwakọta Husky a na-aza azịza kachasị mma maka ọzụzụ nkịta.
Pumụ nkịta a nwere ọgụgụ isi nke ukwuu ma jiri ụgwọ ọrụ dị ụtọ na usoro ọzụzụ dị obere ihe ị na-enweghị ike ịkụziri ha. Ozugbo ha ghọtara ọrụ ị gaghị enwe ike ịkụziri ha ọzọ.
O di nwute na nkuzi adighi adi mfe mgbe niile.
Huskies bụ nkịta dịpụrụ adịpụ na nke isi ike.
Ọjụjụ ha jụrụ ịrụ ọrụ nwere ike ịna-akụda ha obi mgbe ụfọdụ. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịkwụsị inwe ndidi n’ihi na ọ nwere ike imebi mmekọrịta gị na nkekọ .
Jidesie ọzụzụ ọzụzụ dị mkpirikpi maka minit 5 ruo 10 kwa ụbọchị.
Ngwakọta Corgi Husky nwere akwa mkpuchi abụọ nwere ike ịdị na-agwụ ike ịlụ nwanyị.
Ọ dị mkpa na ị hichaa ha site n’imi n’ọdụ otu ugboro n’ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ . N'oge ọkọchị na oge udu mmiri ị nwere ike chọọ ịhịchaa ha kwa ụbọchị iji belata mbupu.
Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike iyi ka ọ na-adọrọ adọrọ ka ịpị uwe nkịta gị n'oge ọnwa ọkọchị. Nke a bụ ihe kachasị njọ ị nwere ike ime dịka akwa akwa ha abụọ na-edozi iji dozie ọnọdụ okpomọkụ ha.
Ọ gwụla ma nkịta gị na-apụta n’ihe na-esi isi ị ga-asa ha kwa ọnwa abụọ. Nke a agaghị enyere aka wepu unyi na dander kama ọ ga - enyere aka wepu ntutu wụsara nke dị omimi n’ime mkpuchi.
Ọ dị mkpa iji hụ na uwe ha dị nkụ mgbe ịsa ahụ ka akwa mmiri mmiri nwere ike iduga na ebu.
Ngwakọta Corgi Husky bụ nkịta na-ahụ ike dị elu.
Ha na-eme egwuregwu dị egwu maka ezinụlọ nwere ụmụaka toro eto ma ọ bụ otu di na nwunye na-arụ ọrụ.
Ngwakọ a chọrọ onye ọzụzụ nwere ahụmịhe na ọtụtụ mmega ahụ, mana ewezuga nke ahụ, ha anaghị adị mfe nlekọta.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwakọta Corgi, mana ịmabeghị ma Horgi kwesịrị gị, enwere ọtụtụ ndị ọzọ Corgi na-agwakọta ! N'otu aka ahụ, enwere ọtụtụ ngwakọta Husky ndị ọzọ dị.
You nwere nkịta a n'ụlọ? You na-eche echiche inweta otu? Ka anyị mara echiche gị na-aza ajụjụ n'okpuru!
Corgipoo: Ihe ichoro ima banyere Cute Corgi Poodle Mix
The Miniature English Bulldog nwere nnukwu obi
nkịta na -amụ bichon frize poodle
onye ọzụzụ atụrụ German husky mix ndụ afọ
kedu ka m ga -esi kọọ nkịta m
German onye ọzụzụ atụrụ ọlaedo retriever mix temperament
ego ole ka obere labradoodles na -eri